Nzira Yokukunda Nharo yevateereri Nokuwana Active Pa Twitter - Dzidzira kubva Semalt
Mabhizinesi akawanda eIndaneti anoshandisa nzira dzakasimba dzekutengesa internet dzinovapa chero vashanyi vavanoda kuwana. Muzviitiko zvakawanda, vanhu vanoita zvekutengesa internet vachiita kuti vatengi vavo vawane webhusaiti yavo munzvimbo dzakasiyana-siyana dzepasi. Mune dzimwe nguva, vanhu vanogadzirisa kudiwa nenzira nenzira iyo vanhu vanowana vatengi vavo.
Social Media Marketing (SMM) inobatsira vanhu vazhinji kuwana mitsara yakawanda yekutengesa kwevatengi. Somuenzaniso, vanhu vanogona kushandisa Twitter kuti vanhu vauye pawebsite. Twitter ine zvakawanda zvinoshandiswa nehuwandu hwe webmasters kuita hukuru hukuru mukushambadzira kwavo. Zvisinei, kune dzimwe nzira dzakakosha iyo chero munhu upi zvake angashandisa kubudirira pa Twitter. Zvimwe zvezvinhu zvakakosha zvepa Twitter zvinopiwa mune mutungamiri uyu naNik Chaykovskiy, the Semalt Mutevedzeri Mukuru weVatengi vanobudirira.
Itai vateereri vakarurama. Paunotumira tweet, inogona kuwana vanhu vakawanda. Vanhu vakasiyana vanogona kupindura kana kupinda mumunda. Iwe unofanira kudzidza kudzivisa vashanyi vasingazoshanduki kuva vatengi. Nenzira iyi, unogona kudzivisa mitambo umo vanhu vanoparadza nguva yakakosha vanogona kuzvitsaurira kune mutengi.
Shandisa mhinduro. Retweeting inyanzvi inogona kubatsira webmasters kuita SEO. Retweet mapepa anoshanda sevane misika uye ane mikana yekugadzira juice kutengesa jisi..Zvisinei, iwe unofanirwa kuchenjerera paunenge uchitora retweeting. Dzimwe nguva, zvinogona kutora humwe hunokosha hwekutaura musati watumira retweet.
Shandisa mavhidhiyo uye zvigadzirwa zvemufananidzo. Tsvaga injini bots inogonawo kuratidzira izvi zvirikuita kuti iite imwe yepamusoro yekutengesa nzira. Mune zvimwe zviitiko, vanhu vanogona kukwanisa nzira dzekugadzira dzekutaura pfungwa nenzira isingasanganisi mazwi akawanda, izvo zvinogona kubvisa nguva yekucherechedza kwemuenzi.
Shandisa meta tags yewebsite. Tsanangudzo tsvakurudzo ndeimwe yezvinhu zvinokosha zvekutsvakurudza kwe webmaster. Zvose SEO basa rinotanga nemashoko akakwana ekutsvakurudza. Somugumisiro, webmaster wese anofanirwa kuita zvinyorwa zvitsva zvinotsvaga zvakakwana kune munhu wose. Mune zvimwe zviitiko, vanhu vanofanira kuunza nzira dzakawanda dzekutora meta dzavo tsanangudzo mumutsara we Twitter search console.
Ziva vateveri vako vechokwadi. Paunenge uchitengesa chero ipi neipi yekutengesa, iwe unofanirwa kuita zvikamu zvakasiyana zvehutano hwekutsvaga hunoita maererano ne injini dzekutsvaga . Mune dzimwe nguva, vanhu vanoshandisa simba rekutengeserana kwepaInternet apo vachiita bhizinesi ravo kusvika kune mamwe mazinga ebhizimisi. Mu Twitter, unofanira kudzidza kudzikwanisa kubatana nevanhu vakarurama. Shandisa nguva yako pane vatengi chete.
Zvizhinji zvebhizimisi zvinopinda mukuronga kwavo kwekutengesa kuburikidza ne e-commerce website. Indaneti ine mikana yakawanda yevanhu vakasiyana-siyana kugadzira zvinyorwa zvinowanikwa kune vanhu vakasiyana-siyana uye webmasters. Makambani makuru ane ruzivo rwakasiyana-siyana rwemagariro ekutengeserana maitiro anoita kuti mamiriyoni evatengi gore negore. Imwe nzira iyo iwe unogona kushandisa nayo Twitter kuunza magwagwa ewebsite yako iri mumutungamiri uyu. Iwe unokwanisa kukwanisa kuita mabasa akawanda akadai sekutengeserana kunotarisirwa uye nekuita munhu Source .